Amawashi amahle kakhulu futhi anembile wemfashini afuna kakhulu | Amadoda aSitayela
IsiJalimane Portillo | | Izithako, imfashini
Uma ufuna ukuba semfashinini, akudingeki ubheke kuphela izingubo ezintsha, kodwa futhi nezesekeli. Izindandatho, namasongo namawashi yizicucu ezibalulekile zokwenza ukubukeka kwakho kubukeke kuthuthukiswe kakhulu. Kulokhu okuthunyelwe sizokhuluma ngakho amawashi wemfashini ka-2018 ukuze ungaphuthelwa yimininingwane futhi ungabuyekezwa.
Ngoba iwashi alitsheli isikhathi kuphela, kodwa isitayela sakho. Lapha sethula amawashi emfashini ka-2018. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi ayini kanye nezici zawo eziyinhloko? Funda ukuze uthole.
1 Amathiphu wewashi lemfashini
2 Amawashi emfashini amaningi we-2018
2.5 ULange noSöhne
3 Amawashi emfashini angabizi kakhulu ka-2018
Amathiphu wewashi lemfashini
Imfashini ayifanele ukulandela kuphela kepha ukubuza. Kungani le modeli yokubuka imfashini? Ngabe inikela ngohlobo oluthile lwesici esisha noma ingabe yenzelwe ukwakhiwa nokuqedwa nje? Into yokuqala okufanele uzibuze yona ukuthi ngabe imodeli esefashini iyasifanela yini isitayela sakho sokugqoka. Kunabantu abaningi abayekile ukusebenzisa iwashi njengoba sihlala sinama-smartphones eseseduze.
Amawashi awagcini isikhathi kuphela, liphinde lisho okuningi ngomuntu obaholayo noma okungenani ukuthi bafisa ukuba yini. Kungcono ukukhohlwa ngentuthuko yezobuchwepheshe bese ucabanga ngalokho iwashi elingakwenzela khona.
Kuhle ukwazi ukuthi iwashi alinamanzi yini. Ukuze wenze lokhu, kufanele wazi angakanani amamitha ukujula akwazi ukumelana ngaphansi kwamanzi.
Kubalulekile ukuthi iwashi lakho lifane nekhabethe njengoba kungaba enye ingubo ekhabethe lakho. Ukuhlangana okukunikezayo nokwehluka kwewashi nomzimba wonke kufanele kube nengqondo. Yize kuzwakala kungajwayelekile, ukuba newashi elibopha umucu wesikhumba kungaphelela ukufanisa izintambo zezicathulo.
Uma sekukhulunyiwe le mihlahlandlela, siqhubekela phambili ukubona amawashi emfashini ka-2018.
Amawashi emfashini amaningi we-2018
Amawashi alo nyaka ngokuvamile ahamba kancane futhi anelungelo lobunikazi elingaphezu kwelilodwa. Zinezicucu zesitayela sokuvuna futhi zengeza ubu-classic kanye nobuntu. Zimnandi impela futhi ziyahlaba umxhwele. Kunezinhlobo zezemidlalo, ezinye zinemishini yesikhathi esizayo kanye nezinye izingcezu zesifazane ezinikeza amawashi ukuziphendukela kwawo.
Abaningi babo bakhetha imibala emisha kanti abanye bazama ukuthola ubukhazikhazi bamawashi amadala. Sithola izingcezu zesilisa lokho kusuka ku-38 kuye ku-45 mm ububanzi futhi egqoke ngegolide, ngeplathinamu, ngobumba, nangezinsimbi eziningi. Ngakolunye uhlangothi, sithola imibala egqamile yemikhakha efana negrey, isiliva, okuluhlaza okwesibhakabhaka okumnyama, okumhlophe nokumnyama.
Kukhona ukunikezwa okubanzi nokuhlukile. Sithola ngisho amawashi wesitayela sakudala abukeka emuhle nganoma yisiphi isikhathi sosuku namanye amawashi ezemidlalo lapho ubuntu bunqotshwa ezemidlalo.
Sizoqala ukuchaza ezibaluleke kakhulu ukuze uthole umbono.
IMontblanc 1858 Geosphere igubha iminyaka engu-160 yokwenziwa kweMinerva, futhi ikakhulukazi ikakhulukazi amawashi ochwepheshe enziwe ngawo-20 nawo-30, ahlanganisa umoya wokuhlola izintaba. Isikhombisa isikhathi somhlaba ngendlela ehlukile lapho kwethulwa khona izimbulunga ezimbili ezibusayo ezimele ama-hemispheres.
Ungayithola itholakala ngezinguqulo ezimbili ezingama-42 mm. Enye yenziwe ngensimbi kanti enye inqunyelwe ezingcezwini zethusi eziyi-1.858. Ibhande lenziwe ngethole elidala noma ngendwangu yemvelo.
Lolu hlobo lwewashi lubizwa ngeSantos de Cartier futhi yiwashi lasenganekwaneni elenziwe ngonyaka we-104 futhi eliguquke lafinyelela ezihlakaleni zethu. Ine-bezel entofontofo futhi imichilo eshintshana kalula ukulingana nosayizi. Inamasongo angafinyezwa futhi anwetshwe ngaphandle kwesidingo sokuya kumenzi wamawashi.
Kutholakala ngezinhlobo eziyi-12 nosayizi ababili bensimbi, insimbi negolide, amakesi egolide nesikhumba kanye nokudayela kwamathambo.
IPanerai Luminor Ngenxa iyindalo encanyana futhi eguquguqukayo egcwala amawashi emfashini. Ishintshe ngokuphelele enobubanzi obungu-38 mm futhi ukubheja izihlakala ezincane. Idizayini emakiwe nolayini bayo abamsulwa nabancane kusho ukuthi ungayijabulela ngakho konke ukunethezeka.
IPiaget Altiplano Ultimate Automatic 910P ingena emkhakheni wamawashi amancane kunawo wonke emhlabeni ngamamilimitha angu-4,30 kuphela ukushuba. Yenzelwe yonke into engenakuhlukaniswa futhi ukunyakaza nebhokisi kwakha into eyodwa. Inezinto ezingama-219 lapho kufakwa khona i-rotor peripheral.
Ububanzi bayo bungu-40 mm futhi bungahlelwa nge-rose noma ngegolide elimhlophe ngentambo emnyama ye-alligator.
Leli washi lingelomndeni weqoqo leLange 1 ebelisebenza kusukela ngo-1994 ukudala amawashi aphambili emhlabeni. Yenziwe ngezinto zegolide ezimhlophe nezibomvu nokudayela okuqinile kwegolide okunamathoni amathathu. Ingafaniswa nebhande elinsundu.
Ukulinganiswa kwayo okwenziwe ngesandla, kuhlotshiswe futhi kwahlanganiswa ngesandla, kusebenza imisebenzi yamahora, imizuzu, imizuzwana emincane ngemizuzwana yokuma, usuku olukhulu lweLange Inkomba yokugcina amandla ka-72.
Kuwo wonke la mawashi angakusiza uthuthukise isitayela sakho, kufanele uqale uzame ukuthi angakulingana kanjani nezingubo ojwayele ukuzigqoka. Kubalulekile ukucabanga ukuthi hhayi kuphela ngoba iwashi linomklamo omuhle lingahamba kahle nesitayela sakho. Yini enye, isabelomali kuyinto okufanele siyicabangele. Uma ezinye izingubo zakho zingenalo ikhwalithi enhle futhi iwashi linjalo, umehluko ezitayeleni uzobonakala kakhulu. Zama ukuguqula zombili ukuze zigqame esixukwini.
Amawashi emfashini angabizi kakhulu ka-2018
Kulabo abangenaso isabelomali esingaka sokuthenga iwashi, nalu uhlu lwamawashi ashibhile, kepha zekhwalithi enhle.
Hugo Boss bukela. Ibhande laso lenziwe ngesikhumba, licwiliswa kuze kube ngamamitha angama-50 ukujula futhi linomklamo omuhle nesiphetho.
I-Nixon. Kulabo abathanda umbala omnyama, leli washi linomklamo onobuhlakani wokuthi kufanelana kahle nesudi. Ingazika ize ifike kumamitha ayi-100.
diesel. Ngaleli washi uzothola yonke induduzo yesikhumba futhi umbala walo omnyama udlala kahle kakhulu nganoma iyiphi inhlanganisela enhle. Ingacwiliswa kuze kufike kumamitha ayi-100.
Casio. Umkhiqizo owaziwa kakhulu futhi usabalele njengeCasio wawungeke ulahleke. Ngaleli washi ungabona isikhathi ebumnyameni ngezandla zayo ezikhanyayo. Simelana kuze kube ngamamitha angama-50 ngaphansi kwamanzi futhi Impilo yebhethri iminyaka emithathu.
Ungaba semfashinini ngaphandle kokuchitha imali engaka ewashini.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi unganquma ukuthenga amawashi amahle kakhulu wemfashini futhi uwajabulele. Ungakhohlwa ukuthi ungashiya imibono ukuxazulula noma imiphi imibuzo.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » imfashini » Amawashi emfashini